သူမရဲ့ ပနျးခြီလကျရာ အနုပညာလေးကိုခပြွလိုကျတဲ့ ယုသန်တာတငျ – MC Tv Club
သူမရဲ့ ပနျးခြီလကျရာ အနုပညာလေးကိုခပြွလိုကျတဲ့ ယုသန်တာတငျ
ခဈြပရိသတျကွီးရအေပွုံးခြိုခြိုလေး နဲ့ အေးခမျြးတဲ့ မကျြနှာလေး ကို ပိုငျဆိုငျထားပွီး မွငျလိုကျရုံ နဲ့တငျအ ခဈြပိုသှားရလောကျအောငျကို ရိုးရိုးရှငျးရှငျးအလှနဲ့ ဖမျးစားညို့ယူနိုငျတဲ့ မငျးသမီးလေးကတော့ ယုသန်တာတငျပဲဖွဈပါတယျနျော။
သူမဟာ အနုပညာလောကမှာနရောတဈနရောကိုပိုငျပိုငျနိုငျနိုငျ ရရှိထားပွီးတော့ပရိသတျတှလေညျး အခိုငျမာရရှိထားတာဖွဈပါတယျ။သရုပျဆောငျပိုငျးမှာလညျး ဘယျလိုဇာတျကောငျမြိုးတှပေဲဖွဈဖွဈသဘာဝကကြပြီပွငျအောငျသရုပျဆောငျနိုငျတာကိုလညျးတှရေ့ပါတယျ။
သူမ ပါဝငျသရုပျဆောငျထားတဲ့ ဇာတျကားတှကေလညျး ပရိသတျတှအေကွိုကျတှစေ့ခေဲ့တဲ့ ဇာတျကားတှပေဲဖွဈခဲ့ပါတယျ။ယုသန်တာတငျဟာ ယနအေ့ခြိနျထိ ပငျကိုယျအလှတရားတှအေပွညျ့နဲ့ နုပြိုနဆေဲဖွဈပွီး ခြောမောလှပနတေုနျးပါပဲနျော။
သှယျလကြဈြလဈြတဲ့ သေးသေးသှယျသှယျ ခန်ဓာကိုယျလေးကိုပိုငျဆိုငျထားတာကွောငျ့မွနျမွနျဆနျဆနျအ ဝ တျအစားလေးတှဝေတျရငျ သူမခန်ဓာကိုယျနဲ့ လိုကျဖကျပွီး ခဈြစရာကောငျး သူဖွဈပါတယျ။
သူမရဲ့ လှုပျရှားမှုလေးတှကေိုလညျး ပရိသတျတှနေဲ့ အဆကျအသှယျ မပွတျရအောငျ ဖျောပွပေးလရှေိ့ပါတယျ။ယုကတော့ လကျရှိမှာ သူဝါသနာပါတဲ့ အလုပျလေးတှကေို လုပျကိုငျပွီး ဘဝကိုအေးအေးခမျြးခမျြး သာဖွတျသနျးနခေဲ့ပါတယျ။
လတျတလောမှာ ပနျးခြီဆှဲတဲ့ သငျတနျးလေးကို တကျရောကျနခေဲ့ပွီး ကိုယျတိုငျရေးဆှဲထားတဲ့ပနျးခြီကားလေးတဈခပျြကို သူ့ရဲ့လူမှုကှနျရကျစာမကျြနှာကနေ ဂုဏျယူစှာနဲ့ မြှဝလောခဲ့ပါတယျ ။
“ကိုယျ့ရဲ့ TGIS လေး. စိတျမရှညျတဲ့ကိုယျလေး lotus leaf painting လုပျတဲ့အတနျးလေး ပွီးအောငျတကျနိုငျခဲ့ပွီ” ဆိုပွီးတော့သငျတနျးလေးကို အောငျမွငျပွီးဆုံးအောငျတကျနိုငျခဲ့တဲ့အတှကျလညျး ပီတိဖွဈနခေဲ့ပါသေးတယျ။ယုသန်တာတငျ ရဲ့ ပနျးခြီကားလေးကို ကွညျ့ပွီး ပရိသတျကွီးရဲ့ အမွငျလေးကိုလညျးမြှဝပေေးခဲ့ပါဦးနျော
သူမရဲ့ ပန်းချီလက်ရာ အနုပညာလေးကိုချပြလိုက်တဲ့ ယုသန္တာတင်
ချစ်ပရိသတ်ကြီးရေအပြုံးချိုချိုလေး နဲ့ အေးချမ်းတဲ့ မျက်နှာလေး ကို ပိုင်ဆိုင်ထားပြီး မြင်လိုက်ရုံ နဲ့တင်အ ချစ်ပိုသွားရလောက်အောင်ကို ရိုးရိုးရှင်းရှင်းအလှနဲ့ ဖမ်းစားညို့ယူနိုင်တဲ့ မင်းသမီးလေးကတော့ ယုသန္တာတင်ပဲဖြစ်ပါတယ်နော်။
သူမဟာ အနုပညာလောကမှာနေရာတစ်နေရာကိုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင် ရရှိထားပြီးတော့ပရိသတ်တွေလည်း အခိုင်မာရရှိထားတာဖြစ်ပါတယ်။သရုပ်ဆောင်ပိုင်းမှာလည်း ဘယ်လိုဇာတ်ကောင်မျိုးတွေပဲဖြစ်ဖြစ်သဘာဝကျကျပီပြင်အောင်သရုပ်ဆောင်နိုင်တာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်။
သူမ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားတဲ့ ဇာတ်ကားတွေကလည်း ပရိသတ်တွေအကြိုက်တွေ့စေခဲ့တဲ့ ဇာတ်ကားတွေပဲဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ယုသန္တာတင်ဟာ ယနေ့အချိန်ထိ ပင်ကိုယ်အလှတရားတွေအပြည့်နဲ့ နုပျိုနေဆဲဖြစ်ပြီး ချောမောလှပနေတုန်းပါပဲနော်။
သွယ်လျကျစ်လျစ်တဲ့ သေးသေးသွယ်သွယ် ခန္ဓာကိုယ်လေးကိုပိုင်ဆိုင်ထားတာကြောင့်မြန်မြန်ဆန်ဆန်အ ဝ တ်အစားလေးတွေဝတ်ရင် သူမခန္ဓာကိုယ်နဲ့ လိုက်ဖက်ပြီး ချစ်စရာကောင်း သူဖြစ်ပါတယ်။
သူမရဲ့ လှုပ်ရှားမှုလေးတွေကိုလည်း ပရိသတ်တွေနဲ့ အဆက်အသွယ် မပြတ်ရအောင် ဖော်ပြပေးလေ့ရှိပါတယ်။ယုကတော့ လက်ရှိမှာ သူဝါသနာပါတဲ့ အလုပ်လေးတွေကို လုပ်ကိုင်ပြီး ဘဝကိုအေးအေးချမ်းချမ်း သာဖြတ်သန်းနေခဲ့ပါတယ်။
လတ်တလောမှာ ပန်းချီဆွဲတဲ့ သင်တန်းလေးကို တက်ရောက်နေခဲ့ပြီး ကိုယ်တိုင်ရေးဆွဲထားတဲ့ပန်းချီကားလေးတစ်ချပ်ကို သူ့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာကနေ ဂုဏ်ယူစွာနဲ့ မျှဝေလာခဲ့ပါတယ် ။
“ကိုယ့်ရဲ့ TGIS လေး. စိတ်မရှည်တဲ့ကိုယ်လေး lotus leaf painting လုပ်တဲ့အတန်းလေး ပြီးအောင်တက်နိုင်ခဲ့ပြီ” ဆိုပြီးတော့သင်တန်းလေးကို အောင်မြင်ပြီးဆုံးအောင်တက်နိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်လည်း ပီတိဖြစ်နေခဲ့ပါသေးတယ်။ယုသန္တာတင် ရဲ့ ပန်းချီကားလေးကို ကြည့်ပြီး ပရိသတ်ကြီးရဲ့ အမြင်လေးကိုလည်းမျှဝေပေးခဲ့ပါဦးနော်
Previous Article ထကျယံကို ဆေးအကွီးကွီး ထိုးလိုကျတဲ့ ရဲရငျ့အောငျ
Next Article စဈတပျခဈြသူ သင်ျဇာမွငျ့မိုရျ ရဲ့ မငျးသားတဈယောကျကို သတိပေးစာ